Muongorori wenhema Petunia Prado del Bosque anoburitsa muunganidzwa wenhetembo Llueve. | Zvazvino Zvinyorwa
Ana Lena Rivera Munoz | | Nhetembo
Rosa Valle, munyori wenyaya yematsotsi akateedzana naPetunia Prado del Bosque, kwaanokweretesa muunganidzwa wake wekutanga wenhetembo.
Iyo inonaya yero kusuwa, kunetseka, shanduko kubva mukati, corvid mhepo, kudzoreredza kwerudo uye vanozviita nenzira yenhetembo. Iye munyori uye mutori wenhau anobva kuGijon Rose mupata akazvinyora nekuzviunganidza mune yake yekutanga nhetembo, yakanzi Iri kunaya, uye ndinoziva inokweretesa hunhu hwake hwekunyepedzera Petunia Prado del Bosque, Tunia, mukuru weHomicides kuGijon Police Station., protagonist wenyaya yematsotsi saga iyo Valle yakatanga chete gore rapfuura nekuburitswa kwa Ucharidza pasi pemvura.
Iri bhuku, rakapepetwa nekuparadzirwa naProducciones Norte, ine graphic kubatana kwe mutambi wemifananidzo Deva Gil Valley, mwanasikana wemunyori, uyo anopokana, muchirongwa ichi, semufananidzo.
Chikamu chenhetembo dzakaunganidzwa mu Iri kunaya vane mavambo avo mu mbiru Tsamba Therapy (www.terapiadeletras.es), blog yakapihwa nemunyori kuchisikwa chake Tunia.
Mune inoverengeka, blog yaPetunia Prado del Bosque inonzi Tantrum uye inoshamisa. Dzimwe ndima dzichapa chikamu chitsva cheHomicide Inspector, umo Rosa Valle anoshanda parizvino, uye mamwe ese zvisikwa zvakazvimirira.
Manzwiro anopinda muunganidzwa wenhetembo ndiwo akasiana neavo vanonyora nekupenda pamadziro eFacebook nemamwe manetwork, kutaura kunotapira nezve mufaro, we mukuru Peter Pan, uko kwakasarudzika, mhuri, hupenyu, munharaunda yedu yevatengi kunyaradzwa kwevanyoro, zvinoratidzwa zvakasungwa nepink uye kukwana.
Rudo, kusavapo, kurwadziwa, kufamba kwenguva ... Misoro yenhetembo dzepasirese inosangana Iri kunaya. Pamwe chete navo, zvimwe zvazvino, senge kuramba kukwegura uye hudzvanyiriri hwezvisungo nemari, pakati pevamwe.
Dhizaini yebhuku racho, kusanganisira kavha, ibasa raBrezo Rubín.
Mvura inonaya, yekutanga kuunganidzwa kwenhetembo dzakanyorwa nemuongorori wekunyepedzera, Petunia Prado del Bosque.
Iri kunaya inotevera ichaunzwa Mugovera, Zvita 22, na12.30: XNUMX masikati, kuCentro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón (CCAI), pamwe nanyanduri weAsturian Vanessa Gutierrez sahosi wemhemberero.
Mvura inonaya ichaunzwa mukati Munoona musi waDecember 12 kuchitoro chemabhuku cheLa Pilarica; on Ribadesella musi waDecember 15 paImba yeCulture; on Gijon musi waJanuary 2, kuchitoro chemabhuku cheLa Buena Letra; uye mukati Oviedo musi waFebruary 22 kuchitoro chemabhuku cheCervantes.
Rose mupata gore rapfuura rakaburitsa rake rekutanga novel, Ucharidza pasi pemvura, yerudzi rwevatema, inogamuchirwa zvinobudirira nevanhu vanoverenga. Muna 2018 zvakaunzawo pachena Gungwa bass Josefina, canoeist muKuburuka kweSella, pamwe nekubatana kweKuronga Komiti yeInternational Descent yeSella (CODIS), yechipiri nyaya yevana munhevedzano yakatanga ne Gungwa bass Josefina, shasha yevolleyball.
Zvakare, Valle yakaburitsa nyaya mune zvinyorwa zvinyorwa, zvakadai se Anorondedzera Mediterranis (Mupepeti. Constantí, 2018) uye Venus husiku (Mupepeti. Rubeo, 2014), mushure mekusarudzwa kwayo muLiterary Awards Constant 2017 uye muI International Erotic Nhau Contest Venus Husiku, maererano.
Rosa Valle ane degree mu Information Sayenzi (Utapi venhau) kubva kuPontifical University yeSalamanca (UPSA), dhigirii repashure kubva kuUNED muTenzi muBusiness Management uye Kushambadzira uye yakanzi CAP (Pedagogical Adaptation Course) muMutauro uye Zvinyorwa neOviedo Yunivhesiti.
Chikamu chakanaka chebasa rake rehunyanzvi chakashandiswa mu Chinyorwa cheAsturian (Izwi reAsturias, El Comercio). Basa rake rezvenhau mumunda weInnovation uye Information uye Kutaurirana Matekinoroji (ICT) rakamuwana mu2012 iyo XII Yenhau Yekutapa Mubairo weInnovation Jose Antonio Coto.
Kune akati wandei makore akarongedza iyo International Short Stories Contest Leopoldo Alas Clarín de Quintes (Villaviciosa-Asturias), yazvino ari mutongi.
Nebasa reruzivo, vechidiki Deva Gil Valley anodzidza kudhirowa nemimhanzi. Kunzwisisa kwake kwakanaka nemapenzura kunouya kubva pazera diki kwazvo. Basa rake remifananidzo rakaratidzirwa muzviratidzwa zveboka uye akapa makwikwi ekudhirowa evana. Iri kunaya ndiro rake rekutanga basa rekuratidzira bhuku.
Zvemifananidzo, Deva Gil Valle akashandisa penzura, marasha, mvuracolor, mucherechedzo nehunyanzvi hweingi. Kunze kwe Mhumhi murubvunzavaeni, iyo yakapinda muchiratidziro cheboka, mamwe ese haana kunyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Muongorori wenhema Petunia Prado del Bosque anoburitsa muunganidzwa wenhetembo Llueve.